Maxaa Ka Dhigay Qalabka Jikada Saliiciya Kala Duwan? | Jingqi
Moodhadhka barafka ee silikoon barafka
Mashiinnada Cake ee Saliida leh
Moodooyinka Shukulaatada ee Saliida
Gacmo gashiyada Silicone
Mashiinnada Kubbadda Caanooleyda ee Silicone Ice
Dhalada Xidhmada Safarka Silicone
Spatula Silicone Spoon
Qalabka jikada ee Silicone
Alaabada 'Silicone Kids Product'
Xargaha silsiladaha silikoonnada
Maxaa Ka Dhigay Qalabka Jikada Saliiciya Kala Duwan?
Qalabka jikada ee silikone iyo maacuunta wax lagu karsado waxay leeyihiin astaamo soo bandhigaya xoogaa faa'iidooyin ah birta, balaastigga, caagagga ama waxyaabaha ka sameysan alwaaxa. Inta badan alaabooyinka loo yaqaan 'silicone' waxay ku yimaadaan midabyo dhalaalaya. Marka laga tago, bal aan tixgelinno astaamahooda kale oo aan aragno haddii maacuunta jikada ee silikon ay mudan yihiin in la isticmaalo gabi ahaanba.
Qalabka wax lagu karsado ee dareeraha leh waxay leeyihiin iska caabin kulul. Waxay u adkeysan kartaa kuleylka aad u sarreeya (soosaarayaasha qaar ayaa sheeganaya iska caabin kuleylka ilaa 600 oo Fahrenheit ah). Haddii aad isticmaaleyso shukumaano silikoon ah ama foorno marka aad karinayso, waa inaadan ka walwalin inay dhalaali doonto markaad si shil ah ugu dhaafto dheriga in muddo ah. Waxaan xasuustaa adeegsiga marawaxadaha aan usha lahayn oo way dhalaalaysaa markaad ku dhex miir saliid aad u kulul. Xitaa waxaa jira mashiinnada dareeraha leh ee loo yaqaan 'silikone' kuwaas oo ku habboon in loo isticmaalo ka qaadista saxanka foornada aad u kulul.
Qalabka wax lagu karsado ee loo yaqaan "silicone" waa kuwo wasakhoobi kara. Tani waa sababta oo ah dabeecadda aan-degdegga lahayn ee silicone. Si aysan u sii hayn ur ur iyo midabyo markaad u isticmaasho dhir udgoon u leh cunno midab leh sida badeecadaha yaanyada ku saleysan. Miyaad la soo kulantay sida ay u adag tahay in meesha laga saaro saabuunta maraqa spaghetti-ta ah ee ku jirta spatula-kaaga caagga ah? Tani waxay sidoo kale ku amaahanaysaa waxyaabaha ka sameysan silicone si loo nadiifiyo ama loo nadiifiyo. Marka la barbardhigo qaadada alwaaxka ah, oo ah mid waxyeelleeya oo xakameyn kara koritaanka microbial, maacuunta silikone ma taageerto koritaanka noocan oo ka dhigaya mid amaan ah xiriirka cuntada.
Qalabka wax lagu karsado ee loo yaqaan 'silicone' waa caag u eg. Tani waxay ka dhigeysaa mid aad u saaxiibtinimo leh marka ay la macaamilayaan sagxadaha-birta ah. Kama xoqin karto ama dhaawici karto dheriga wax lagu kariyo iyo dheriga sida alwaax ama qaadooyinka macdanta ah. Dabacsanaantaani waxay ka dhigeysaa mid waxtar leh sida spatula caagga ah ee xoqidda kuwa baytariga keega ah ee weelka miiska isku qasan.
Qalabka wax lagu karsado ee loo yaqaan "silicone" waa kuwo aan xirneyn oo xiran. Sicirka loo yaqaan 'silicone class' waa mid aad u aamin ah in lagu isticmaalo nooc kasta oo cunto ah. Kama falcelinayso cunnada ama cabbitaannada ama soo saarin qiiq khatar leh. Waxay kaga duwan yihiin biraha qaar ee demi kara marka ay ku sii daayaan aashitada qaar cuntada. Si xun ugama falceliso la kulanka soo-gaadhista heerkulka xad-dhaafka ah. Tan macnaheedu waa inay u badan tahay inay sii dheeraanayso qalabka kale ee jikada.
Waqtiga boostada: Jul-27-2020
Miyaa Dariiqa Cayriyeyaasha Barafka ee Silicone Ice Cube?
Xagaagii waa joogaa, taas micnaheeduna waa inaad kubixin doontaa waqti fiican oo isku day inaad isdejiso. Mid ka mid ah qaababka ugu dhaqsaha badan ee lagu qaboojiyo ayaa ah gudaha gudaha: Ma jiraan wax la mid ah cabitaanka qabow barafka oo hoos u dhiga heerkulkaaga oo kaa caawiya inaad dareento nasiino maalinta kulul. Sida ugu wanaagsan ee loo helo ...
Qalabka jikada ee silikone iyo maacuunta wax lagu karsado waxay leeyihiin astaamo soo bandhigaya xoogaa faa'iidooyin ah birta, balaastigga, caagagga ama waxyaabaha ka sameysan alwaaxa. Inta badan alaabooyinka loo yaqaan 'silicone' waxay ku yimaadaan midabyo dhalaalaya. Marka laga tago, aan ka fiirsano astaamahooda kale oo aan aragno haddii jikada loo yaqaan 'silicone kitchen ...
Su'aalaha ku saabsan badeecadaheena ama qiimeyahankeena, fadlan noogu soo dir emaylkaaga annagana waan la soo xiriiri doonnaa 24 saacadood gudahood.
No.43 XiaCun ShangTang Village Guankou Town JiMei Degmada Xiamen Fujian China